पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सरादेवीले कोसंग गरिन विवाह ? | NepalDut
पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सरादेवीले कोसंग गरिन विवाह ?
ब्याडमिन्टनकी पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सरादेवी तामाङ विवाह बन्धनमा बाधिँएकी छिन् ।
नेपाली सेनाकी क्याप्टन उनि बुधबार डोटीका प्रज्वल श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी हुन् । प्रज्वल पनि ब्याडमिन्टनका ‘ए’ लेभल उतिर्ण ब्याडमिन्टन प्रशिक्षक हुन् । सराका बहिनी नङसलदेवी र भाई रत्नजित ब्याडमिन्टन खेलाडी हुन् ।
नङसलदेवी महिला र रत्नजित पुरुषतर्फ वरियताको शीर्षस्थानमा छन् । चोटका कारण पूर्व नम्बर एक सरा ब्याडमिन्टन कोर्टमा उत्रिएका छैनन् । उनी नेपालमै आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० बाट कोर्टमा फर्कने तयारीमा छन् ।
सराका श्रीमान् प्रज्वल सटल टाइम नेपालका टुटर र बिडब्लुएफ लेभल वान प्रशिक्षक हुन् । प्रज्वल कामको सिलसिलामा भारतको बैंग्लोर गएको र त्यहाँ रहँदा ब्याडमिन्टन बैंग्लोर एकेडेमीमा काम गर्न सुरु गरेका थिए । त्यहाँ १ वर्ष काम गर्दै उनी आफैले एसपी एकेडेमी स्थापना गरेका छन् ।